Welcome to Aungmyaythazan
မွို့နယျ Aungmyaythazan ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ အမရပူရမွို့နယျ အောငျမွသောစံမွို့နယျ
အောင်မြေသာစံမြို့နယ် သည် မန္တလေးမြို့၏ မြောက်ဘက်ဆုံးအပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း (၁၉) ရပ်ကွက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပြင်ဦးလွင်သွား ကားလမ်း နှင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် တို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက် ရှိပါသည်။ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် ပျမ်းမျှ အမြင့် (၂၅၆) ပေ အထက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် (၇၇၆) ပေ အမြင့်ရှိသော မန္တလေးတောင်နှင့် မန္တလေးမြို့၏ အထင်ကရ နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည့် မြနန်းစံကျော် ရွှေနန်းတော်ကြီး တည်ရှိရာ မြို့နယ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် (၂၈.၆) ဧရိယာစတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာ လျှင် (၉၃၀၅.၁) ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင်စာရင်းအရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၄၉၇၃၁) စု နေထိုင်လျှက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၆၅၇၇၉) ဦးမျှ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်တွင် ဆိုင်၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပေါင်း (၇၅၀၀) ကျော် တည်ရှိနေပြီး ယင်းလုပ်ငန်းများတွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၃၉၉၀၀) ကျော်ခန့် အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးလမ်းညွှန် မှကောက်ယူသည့် စာရင်းများအရ သိရှိရပါသည်။
အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း (၃၆) ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၆) ကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း (၁၃) ကျောင်း တည်ရှိပြီး မြို့နယ်၏ စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်များမှာ (၀၅၀၁၁၊ ၀၅၀၁၂၊ ၀၅၀၁၃၊ ၀၅၀၁၄၊ ၀၅၀၁၅)တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ဟု တင်စားရသည့် ဗုဒ္ဓစာပေကျောက်စာများ တည်ရှိရာ ကုသိုလ်တော်ဘုရားမှာလည်း အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၏ အထင်ကရ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
အတုမရှိကျောင်း (မဟာ အတုလဝေယံ ကျောင်းတော်ကြီး)
Thudamar Rest House
Population In Conventional HouseHolds 241,519 241,519
Number Of Convetional Households 49,731 49,731
• In Aungmyetharzan Township, there are more females than males with 96 males per 100 females.
• In Aungmyetharzan Township, entire population live in urban areas.
• The population density of Aungmyetharzan Township is 9,305 persons per square kilometre.
•There are 4.9 persons living in each household in Aungmyetharzan Township. This is slightly higher than the Union average.
Productions 307 3387
Retails 2801 11094
Wholesales 899 4699
Services 3491 20138
Trading 35 625
All about Aungmyaythazan
: Dr Hla Moe
: Dr Nyi Min Han
: Dr Kyaw Oo
Address : S-1, 12th St., Between 87 St. and 88 St.,
Phones : 09-455500090, 09-455500070
Category : Fishing & Angling Equipment
Address : 30/A, 84 St., Between 24 St. and 25 St.,
Phones : 02-4036257, 09-402012880
Baho Ko Soe Myint
Address : 132, Between 83 St. and 84 St., 26(B) St, Near of Clock Tower,
Phones : 02-4072643, 09-976060333
Phones : 09-976060333, 02-4073190
Category : Schools [Basic Education]
News & Info : ယနေ့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများအား ပြသခွင့်တရားဝင်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ New Opening : CB Bank ၏ (၂၃၃)ဘဏ်မြောက် မန္တလေး(၂၆-Bလမ်း)ဘဏ်ခွဲကို မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၈၀)၊ (၂၆)လမ်း၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် တွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ Movie Of The Week : အိမ်မှာအေးဆေးအနားယူလို့ ရပါတယ်။ ဒီတော့ အိမ်မှာအနားယူရင်း ကြည့်ရှုလို့ရအောင် သရဲကားကြိုက်သူတွေအတွက် 2020 ရဲ့ အကောင်းဆုံး သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကား(၆)ကားကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ News & Info : COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် သတ်မှတ်၍ မန္တလေးမြို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၌ သီးခြားထားရှိ ကုသနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ယနေ့ မတ်လ(၁၇)ရက် နံနက်ပိုင်းက သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း Covid-19 ရောဂါ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး ကုသရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (SRT) အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်က ပြောကြားထားကြောင်း သိရသည်။ News & Info : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI)နှင့် ညီနောင်ကုန်သည်အသင်းများ ပူးပေါင်းကာ မန္တလေးမြို့ရှိ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ဆန်နှင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးမည်ဟု အဆိုပါအသင်း၏ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားထားပါတယ်။
News & Info : ယနေ့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများအား ပြသခွင့်တရားဝင်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
New Opening : CB Bank ၏ (၂၃၃)ဘဏ်မြောက် မန္တလေး(၂၆-Bလမ်း)ဘဏ်ခွဲကို မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၈၀)၊ (၂၆)လမ်း၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် တွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။
Movie Of The Week : အိမ်မှာအေးဆေးအနားယူလို့ ရပါတယ်။ ဒီတော့ အိမ်မှာအနားယူရင်း ကြည့်ရှုလို့ရအောင် သရဲကားကြိုက်သူတွေအတွက် 2020 ရဲ့ အကောင်းဆုံး သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကား(၆)ကားကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
News & Info : COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် သတ်မှတ်၍ မန္တလေးမြို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၌ သီးခြားထားရှိ ကုသနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ယနေ့ မတ်လ(၁၇)ရက် နံနက်ပိုင်းက သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း Covid-19 ရောဂါ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး ကုသရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (SRT) အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းသန်းမြင့်က ပြောကြားထားကြောင်း သိရသည်။
News & Info : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI)နှင့် ညီနောင်ကုန်သည်အသင်းများ ပူးပေါင်းကာ မန္တလေးမြို့ရှိ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ဆန်နှင့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးမည်ဟု အဆိုပါအသင်း၏ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားထားပါတယ်။
ဧပွီ ၁၅ ရကျနေ့ နောကျပိုငျးမှသာ နယျစပျဂိတျမြားမှ ပွနျလညျ ဝငျရောကျခှငျ့ပွုမညျ